Ukuphupha ngamahlwempu Discover ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iifakirs zokuqala zabalandeli beSulumane. Namhlanje, ngakumbi e-Indiya, baninzi abantu abangenamakhaya nabahluthwayo abaye bakhulisa ulawulo lomzimba olukhethekileyo ngendlela yabo yokuphila ngokuzonwabisa. I-fakir inokunikezelwa ingakhathaleli iintlungu ngokwenza umthambo kunye nokusebenza kwengqondo. Abanye bahamba njengabajusi kwaye babonise ubugcisa babo eluntwini. Umzekelo, banokulala ebhodini yezikhonkwane okanye bahambe kumalahle ashushu kunye neglasi eyaphukileyo ngaphandle kokuzenzakalisa.
Ukuba umntu uphupha ngefakir, mhlawumbi unomdla kwinkangeleko yayo engaqhelekanga kunye nendlela yokuphila engaqhelekanga. Unokuba nomdla wokufumana obu buchule ngokwakho. Iinkcukacha zephupha kunye nokunxibelelana nemeko yobomi bobuqu zibaluleke kakhulu ekutolikeni kwephupha.
1 Uphawu lwephupha «fakir» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «fakir» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «fakir» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «fakir» - ukutolikwa ngokubanzi
Isimboli yamaphupha "fakir" yalatha ekutolikeni amaphupha ngokulangazelela amazwe akude kunye nabantu abangaqhelekanga. Ukuphupha kunokwenzeka ukuba ngokwakho ubulolo kunye notyekelo lwezimvo ezinomdla kwelinye icala, kodwa zinokuboyikisa abanye kwelinye.
Iphupha likwabonisa ukuba ukuphupha kufuneka kunyamezele ubunzima obuninzi ebomini bokwenyani. Nangona kunjalo, ukufezekisa injongo yakho, yamkele oku.
Ngokwenkcazo edumileyo yamaphupha, i-fakir ephupheni ihambelana nomqondiso weziganeko ezithandekayo nezingaqhelekanga. Uphawu lwephupha lubonisa ephupheni ukuba iminqweno engaqhelekanga nayo inokuzaliseka.
Kwakhona, ifakir iyashiya ephupheni. Utshintsho enokuba zombini zilungile kwaye azibi. Umtsalane ovela kwi-ascetic unakho, ngokokutolikwa kwephupha, ikwanokubhekisa kumntu kubomi bokwenyani otsala iphupha phantsi kwesipelingi salo ngemitha yalo.
Uphawu lwephupha «fakir» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokwamaqondo engqondo, ifakir ekutolikeni amaphupha ifanekisela umfokazi kubuntu bakhe.
Isimboli yephupha ikwaluphawu lwe bulumko yokungabikho zingqondweni, kunye nokulangazelela inkqubela phambili yokomoya kunye nokomoya. Ibandakanya imeko yephupha yokwandisa ukuqonda kwakho kunye nokuphonononga iindawo ezingaziwayo zobuntu bakho. Nangona kunjalo, akufuneki uye kude kakhulu.
Ephupheni, i-subconscious iyalumkisa ukuba ungazijongi kakhulu kwaye ungaphulukana nabanye abantu. Isimboli yephupha "fakir" kukuchazwa kwephupha isilumkiso ngokuchasene nokuzicingela kakhulu kunye nokuzirhoxisa.
Indlela yokuphila yendlela yokuphila ye-ascetic ikwabonisa isidingo sokwenza njalo ubunyuluoko kuphupha kufuna ngokwengqondo yayo, kodwa nakwabanye.
Nangona kunjalo, ngokwenkcazo yengqondo yephupha, i-fakir ikwanakho ukubonisa ukungqubana kunye neempembelelo zakhe ephupheni. Uphawu lwephupha lubonisa ukuba ukuphupha kuyazicinezela iimfuno zakho zendalo, umzekelo, ukuthambisa isini sakho kwimikhwa yokuziphatha engqongqo.
Uphawu lwephupha «fakir» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya, uphawu lwephupha "fakir" lumele iinzame zokuqhubela phambili ukuphuhlisa ukuthanda ukuthanda kwaye ngenxa yoko ubomi bomoya. Ephupheni kuvela ukuqheleka nomntu ongaqhelekanga, ophupha ngeendlela ezingaqhelekanga injongo yokomoya Izikhokelo. I-fakir ikwabonisa njengophawu lwephupha lokuba ukukhula kwengqondo kukwafuna ukuzincama ngokuphupha.